Dowlada Ethiopia oo xaalad deg-deg ah ku dhowaaqday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
10th October 2016 A warsame Af Soomaali 0
Itoobiya ayaa ku dhawaaqday Lix bilood oo xaalad degdeg ah kadib muddo bilooyin ah oo ay socdeen banaanbaxyo rabshado wata oo xukuumadda looga soo hor jeedo kuwaasoo ruxay gobolka dalkaas ugu weyn ee Oromiya.
Ugu yaraan 500 oo qof ayaa dhintay tan iyo markii ay banaanbaxyadu billowdeen November-tii kal hore iyadoo dadka banaanbaxayay ay diidanaayeen in dhulka ay leeyihiin qowmiyada Oromiya oo ah qowmiyada ugu badan dalka Ethiopia ay dowlada la wareegto.
Dhawaan ayaa waxaa waddanka soo maray isku dhacyo todobaad socday, kuwaasoo u dhaxeeyey booliska iyo dad mudaaharaadayey, ka dib markii 55 qof ay ku dhinteen isbuurasho dhacday intii ay socotay xaflad-dhaqameed ay dadka Oromadu lahaayeen.
Dadka banaanbaxayey ayaa ku eedeeyey ciidanka amaanka inay sababeen dhimashada, waxayna bartilmaameedsadeen shirkadaha shisheeye iyo dhismayaasha iyo gaadiidka xukuumadda intii ay banaanbaxyadu socdeen.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan faahfaahinta xaaladda degdegta ah ee dalka lagu soo rogay. Xigasho Jowhar.com
Maxamed Siyaad Barkhadle oo Loo Doortay Gudoomiyaha KMG ee Maamulka Hirshabelle.